၅၀ မီတာ ရေစိုခံ ပြင်သစ် Cable Reel ထုတ်လုပ်သူ နှင့် ပေးသွင်းသူများ - လက်ကားရောင်းအား စိတ်ကြိုက် မြင့်သည် အရည်အသွေး ၅၀ မီတာ ရေစိုခံ ပြင်သစ် Cable Reel - Bohao
ပြင်သစ် Cable elsရာဝတီ
ဂျာမနီ Cable elsရာဝတီ
ဥရောပ Cable elsရာဝတီ
ဗြိတိန် Cable elsရာဝတီ
အစ္စရေး Cable elsရာဝတီ
အီတလီ Cable elsရာဝတီ
IEC 60309 Cable elsရာဝတီ
အမေရိက ပါဝါ ကြိုး
အာဂျင်တီးနား ပါဝါ ကြိုး
သြစတြေးလျ ပါဝါ ကြိုး
ဘရာဇီး ပါဝါ ကြိုး
တရုတ် ပါဝါ ကြိုး
ဒိန်းမတ် ပါဝါ ကြိုး
ဥရောပ ပါဝါ ကြိုး
အင်ဒိုနီးရှား ပါဝါ ကြိုး
အစ္စရေး ပါဝါ ကြိုး
အီတလီ ပါဝါ ကြိုး
ဂျပန် ပါဝါ ကြိုး
ကိုရီးယား ပါဝါ ကြိုး
တောင် အာဖရိက ပါဝါ ကြိုး
ဆွစ်ဇာလန် ပါဝါ ကြိုး
ထိုင်းနိုင်ငံ ပါဝါ ကြိုး
ဗြိတိန် ပါဝါ ကြိုး
IEC 60320 ပါဝါ ကြိုး
အမေရိက တိုးချဲ့မှု ကြိုး
သြစတြေးလျ တိုးချဲ့မှု ကြိုး
ဘရာဇီး တိုးချဲ့မှု ကြိုး
တရုတ် တိုးချဲ့မှု ကြိုး
ဥရောပ တိုးချဲ့မှု ကြိုး
ဂျပန် တိုးချဲ့မှု ကြိုး
IEC 60309 တိုးချဲ့မှု ကြိုး
ပါဝါ strips တွေ
ဥရောပ ပါဝါ strips တွေ
အီးယူ ပလပ် Adapters
ဗြိတိန် ပလပ် Adapters
ပါဝါ ကြိုး ဝါယာကြိုး
ဥရောပ ပါဝါ ကြိုး ဝါယာကြိုး
ပလပ်များ နှင့် ခြေစွပ်
ကြိုး သိုလှောင်ခြင်း Reel
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Cable elsရာဝတီ > ပြင်သစ် Cable elsရာဝတီ > ၅၀ မီတာ ရေစိုခံ ပြင်သစ် Cable Reel
16 Amps ချိတ်ဆက်သည် adapter ကြိုး Reel
အစ္စရေး4Socket Cable Reel
ဂျာမန် တိုးချဲ့မှု Cable Reel
၅၀ မီတာ ရေစိုခံ ပြင်သစ် Cable Reel
ဗြိတိန်4ဆိုင်ခွဲများ Cable Reel
Bohaoကေဘယ်လ်s ပံ့ပိုးပေး ၅၀ မီတာ ရေစိုခံ ပြင်သစ် ကေဘယ်လ် reel, ဥယျာဉ် လှည့်ကွက် လည်စည်း ဝါယာကြိုး ကေဘယ်လ် reel ကျစ်လစ်သိပ်သည်း စည်။ ဝယ်ယူ ဥရောပ Socket Cable reel, ကျေးဇူးပြု ဆက်သွယ်ရန် Bohaoကေဘယ်လ်s, တရုတ် လူသိများတဲ့ ကေဘယ်လ် reel ထုတ်လုပ်သူ။
၁။ ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက် ၅၀ မီတာရှိသောရေစိုခံ French Cable Reel
Cable reel ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သေးငယ်သောတပ်ဆင်မှုနေရာ၊ အဆင်ပြေသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောအသုံးပြုမှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်နည်းခြင်းစသောစွမ်းဆောင်ရည်များကြောင့်မိုဘိုင်းဂီယာ (စွမ်းအင်၊ ဒေတာနှင့်မီဒီယာ) ၏အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။
2. ကုန်ပစ္စည်း Parameter (အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်) 50m ရေစိုခံပြင်သစ် Cable Reel
Zhejiang, တရုတ် (ပြည်မ)
plug / socket:
ပြင်သစ် plug3ဝါယာကြိုး / ပြင်သစ် socket
Reeled max 0.92KW (4.0A)
ပြန်လည်မွမ်းမံထားသည့် max 3.22KW (14A)
Cable အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ -
H05VV-F 3X1.5mm2 / Optional
၃. ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးနှင့်အသုံးပြုမှု ၅၀ မီတာရှိသောရေစိုခံပြင်သစ် Cable Reel
၁။ linear ပုံစံရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ Plate ပုံသေတပ်ဆင်ထားသည့်လက်ကိုင်လက်ကိုင်နှင့်တပ်ဆင်ရန်နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသည်။
၄။ လေဆာစက်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန် linker တစ်ခုကို သုံး၍ ၎င်းကိုအဆာစက်နှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
၅။ ဤအပူရှိန်ကာကွယ်မှုနှင့်ရေစိုခံနိုင်သည့်ဤကေဘယ်ကြိုးသည်မိသားစု၊ စက်ရုံများ၊ ကျောင်းစသည်တို့နှင့်သက်ဆိုင်ပါသည်။
၄။ ၅၀ မီတာရှိသောရေစိုခံပြင်သစ် Cable Reel ၏ထုတ်လုပ်မှုအသေးစိတ်
ထိုကဲ့သို့သော Cable Reel သည် USB၊ LED၊ ၂ ခု၊ ၃ ခုနှင့် ၃ ခုနှင့် ၄ ခုမှထွက်သောမြင့်မားသော protector, circuit breaker နှင့် RCD protection တို့ပါ ၀ င်သည့် adapter ကြိုး reel ဖြစ်သည်။ အာရှစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဥရောပ CEE7-Schuko socket, ဆွစ်ဇာလန် SEV 1011 socket, Italy CEI 23-16 socket, British BS1363 socket, Australia AS / NZS 3112 socket, China GB socket, Whatထို့အပြင် ၂ ဆိုင်၊ ၃ ဆိုင်နှင့် ၄ ဆိုင်ခွဲသည်လူကြိုက်အများဆုံးတိုးချဲ့စက်များဖြစ်သည်။
မောင်းနှင်မှုပုံစံအရကေဘယ်ကြိုးကိုလျှပ်စစ်မဟုတ်သောအမျိုးအစားနှင့်လျှပ်စစ်အမျိုးအစားသို့ခွဲခြားနိုင်သည်။ ကေဘယ်လ်ကြိုးများ၏အစီအစဉ်အရ၎င်းကိုအမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲနိုင်သည် - axial single row နှင့် axial multiple row ။ collector slip slip ring ကိုပုံစံနှစ်မျိုးခွဲခြားသည်။ အတွင်းပိုင်းစလစ်လက်စွပ်အမျိုးအစားနှင့်အပြင်ဘက်စလစ်လက်စွပ်အမျိုးအစား။ အကွေ့အကောက်များသောအရာသည် cable reel နှင့် hose reel သို့ခွဲသည်။ လျှပ်စစ်မဟုတ်သောအမျိုးအစားတွင် elastic force (TA) type၊ သံတူ (ZC) အမျိုးအစား၊ သံလိုက်နားချင်းဆက်မှီမှုအမျိုးအစား (JQC); electrodynamic အမျိုးအစားတွင်သံလိုက်အိမ်ချင်းချိတ်ဆက်မှုအမျိုးအစား (JQD)၊ torque motor type (KDO)၊ hysteresis type (CZ) နှင့်ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းထိန်းချုပ်မှုအမျိုးအစား (BP) တို့ပါ ၀ င်သည်။
အလုပ်လုပ်သောနိယာမ - elastic cable reel ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်သံမဏိတိပ်နှင့်လိုက်ဖက်သည်။ cable ကိုဆွဲထုတ်သောအခါစွမ်းအင်သိုလှောင်ရန် coiling spring ကိုတင်းကျပ်သည်။ ပြင်ပအင်အားဆုတ်ခွာသွားသောအခါနွေ ဦး သည်စွမ်းအင်ကိုထုတ်လွှတ်ပြီးကြိုးသည်ကြိုးကိုအလိုအလျောက်ပြန်လှည့်ပေးလိမ့်မည်။
စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အင်္ဂါရပ်များ - ရိုးရှင်းသောတပ်ဆင်ခြင်း၊ ကောင်းမွန်သောထပ်တူပြုခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်၊ သေးငယ်သော cable တင်းမာမှု၊
သက်ဆိုင်သောစက်ကိရိယာများ - ဥပမာလျှပ်စစ်သံလိုက်ပုံး၊ ဖမ်းဆုပ်ခြင်း၊
၅. မီတာ ၅၀ ရေစိုခံပြင်သစ် Cable Reel ၏ကုန်ပစ္စည်းအရည်အချင်း
ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည် - တစ်လလျှင် 10000 Piece / Pieces
(၆) မီတာ (၅၀) ရေစိုခံနိုင်သော Cable Reel တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ခြင်း
1) .Delivery အချိန်
အပ်ငွေလက်ခံရရှိပြီးနောက်လုပ်ငန်း ၁၅ ရက်မှ ၃၀ ရက်အတွင်း။
ယေဘုယျအားဖြင့် destination သည်ဆိပ်ကမ်းကိုမှ5ရက်မှ 10 ရက်။
4) .Payment စည်းကမ်းချက်များ
FOB, CFR နှင့် CIF တို့သည်ဘုံကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများဖြစ်သည်။ တင်ပို့ခြင်းမပြုမီပေးဆောင်ထားသောငွေပမာဏကိုကြိုတင်ငွေ ၃၀% ကြိုတင်လက်ခံနိုင်သည်။
လက်ခံရရှိပြီးနောက်တစ်နှစ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းကိုယ်တိုင်တွင်အရည်အသွေးပြproblemနာရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်တာ ၀ န်ယူလိမ့်မည်။
hot Tags:: ၅၀ မီတာ ရေစိုခံ ပြင်သစ် Cable Reel, ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ, စက်ရုံ, လက္ကား, စိတ်ကြိုက်, မြင့်သည် အရည်အသွေး, အခမဲ့ နမူနာ, တွင် စတော့ရှယ်ယာ, လျှော့စျေး, အနိမ့် စျေးနှုန်း, စျေးနှုန်း, စျေးနှုန်း
ပြင်သစ် ခရီးဆောင် Cable Reel ကိုင်ဆောင်သူ
16A 250V ပါဝါ ပြင်သစ် Cable Reel
ပြင်သစ် Cable Reel နှင့် အပူလွန်ကဲ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
ပြင်သစ် အမျိုးအစား4နည်းလမ်းများ Cable Grounding Reel
4 ထွက်ပေါက် ပြင်သစ် ပါဝါ ကြိုး Cable Reel
ယူအက်စ်အေ ပါဝါ ကြိုး
ဘို့ စုံစမ်းရေး အကြောင်း ငါတို့ ထုတ်ကုန်များ ဒါမှမဟုတ် စျေးနှုန်းစာရင်း ကျေးဇူးပြု ထွက်ခွာသွားသည် yငါတို့ အီးမေးလ် သို့ ငါတို့ နှင့် ကျွန်တော်တို့ အလိုတော် ဖြစ်လိမ့်မည် တွင် သို့uch withတွင် 24 hငါတို့s.
လိပ်စာ: NO.818, Huancheng အနောက် လမ်းမကြီး မြို့, Cixi, Ningbo, Zhejiang ပြည်နယ်, P.R.C ။
မူပိုင်ခွင့် Â© 2019 Ningbo Bohao ဝါယာကြိုး & Cable ကုမ္ပဏီလီမိတက်။ အားလုံး အခွင့်အရေး ကြိုတင်ကာကွယ်ထားသည်